१० तस्विरमा हेर्नुहोस् नाडा अटो शोमा पत्रकारको व्यस्तता (फोटो कथा)
ARCHIVE, OFF THE BEAT » १० तस्विरमा हेर्नुहोस् नाडा अटो शोमा पत्रकारको व्यस्तता (फोटो कथा)
काठमाडौँ - काठमाडौँमा जारी नाडा अटो शोमा अरु कार्यक्रममा भन्दा बढीनै भीड हुन्छ पत्रकारको । नहोस् पनि किन, जनतालाई ठगेर मोटाएकादेखि अटो क्षेत्रमा केहि गर्न खोज्नेहरुलेनै पालेका छन् नेपाली मिडिया । देशका ठुला रियालिटी शोहरु ठग गाडी कम्पनीको प्रायोजनमा चलेका छन् र कालोबजारी गरेर जनता ठग्ने गाडी कम्पनीहरुले ठुलो रकम खर्च गरेका छन् मिडिया हाउसहरुमा ।
विज्ञापन एजेन्सीहरु बढी बेफुर्सदी भएका छन् यतिबेला । र सबैजसोलाई सबै जसो मिडिया चाहिएको छ । र त पत्रकारको व्यस्तता जारी छ । नहोस् पनि किन, अव मालिकले अर्हाएपछी गर्नै पर्यो । र त रहर वा आवश्यकताभन्दा बढी बाध्यताका कारण अधिकांस संचारकर्मीको व्यास्ता ठुलै थियो नाडा अटो शोमा । कारण जे सुकै होस्, इमान्दार पत्रकारहरु आफ्नो काममा तल्लीन थिए । शोका राम्रा पक्षमात्र देखाउन र खिच्न आएकादेखि नराम्रा पक्ष खोजी खोजी आफ्ना क्यामरामा कैद गर्न तल्लीनहरुको व्यस्तता उस्तै थियो शोमा ।
उसो त पुग्नका लागि मात्र पुग्ने पत्रकारहरुको भीडपनि सानो थिएन शोमा । हेरौं नाडा अटो शोमा पत्रकारहरुको व्यस्तता :
अपरेशन नम्बर १२
होसियार ! स्किमको लोभमा फस्नुहोला नि ! भूकम्प पीडीतहरुलाई 'लुट्न' हुन्डाईले ल्यायो यस्तो योजना
अपरेशन नम्बर ११
महिन्द्रा KUV100 गाडी: एक्लै चढ्न 'सानदार', तर बालबालिकाका लागि 'असुरक्षित' !
अपरेशन नम्बर १०
गाडी बिक्नै छाडेपछि 'ठग' कम्पनीको यो हदसम्मको नाटक, जनता फसाउन उधारो कारोबारको 'पासा' !
अपरेशन नम्बर ९
प्रकाशित : Tuesday, August 29, 2017
Tags : ARCHIVE, OFF THE BEAT